शब्दमा लोकप्रिय गीतकार रमेश बिजीले मुटु नै निकालेर राखेको जस्तो प्रतीत हुन्छ - DURGA PANGENI
Home / मनोरन्जन / विचार / साहित्य / शब्दमा लोकप्रिय गीतकार रमेश बिजीले मुटु नै निकालेर राखेको जस्तो प्रतीत हुन्छ
शब्दमा लोकप्रिय गीतकार रमेश बिजीले मुटु नै निकालेर राखेको जस्तो प्रतीत हुन्छ
by Durga Pangeni on November 04, 2020 in मनोरन्जन, विचार, साहित्य
शब्दमा लोकप्रिय गीतकार रमेश बिजीले मुटु नै निकालेर राखेको जस्तो प्रतीत हुन्छ । यौटा सिनेमा तयार हुन सक्ने सिङ्गो कथा समेटिएको गीत, आजको यो प्रतिकुल परिस्थितिले उब्जाएका जटिलतालाई माला जस्तै शब्दमा उनिएको छ गीतमा । देश, काल, परिस्थिति, समाज, आमा, परदेश, रहर, बाध्यता अनि कर्म, परिवार, दुख पिडा र बाच्ने उच्चतम रहर, मृत्युको शाश्वत सत्य.....सबै कुरा ! गीतकार रमेश बिजीको उत्कृष्ट गीत मध्ये यो गीत पनि सूचीकृत हुनेछ।
वरिष्ठ सङ्गीतकार सुरेश अधिकारीले गीतकारका शब्दमा सुमधुर लय भरेको अर्को उत्कृष्ट धुन हो । ओजपूर्ण मिठासले भरिपूर्ण छ गीत । ‘एक धर्को सिन्दूर के हो र, त्यो त पखालिन सक्छ’ भन्ने गीतको सङ्गीतमा मन्त्रमुग्ध भएको म यो गीतको लागि सृजित धुनमा पनि उत्तिकै मदहोस भएको छु ।
राज सिग्देल को स्वरको मिठास वर्णन गरेर साध्य छैन । उनी भाइरल हुने गीत गाउदैनन् होला तर लामो साधनाले खारिएका उनका प्राय सबै गीत कर्णप्रिय हुन्छन् । भिडियोमा पनि निकै मिहिनेत गरिएको छ । उषा रजक फिचर्ड भिडियोले गीतको भावलाई दर्साउन कुनै कसर वाकी राखेको छैन ।
तर पनि, यति दिग्गज व्यक्तित्वहरूको मेहनतले तयार भएको यो अब्बल सृजना किन दर्शकको नजरमा पर्न सकेन ? बिन्दबासिनी म्युजिक जस्तो ठुलो प्लेटफर्म मा आएको यो गीत भाइरल हुनुपर्ने हो तर सार्वजनिक भएको एक हप्ता भइसक्दा समेत गीतले बिस हजार मात्रै दर्शक पाएको छ ।
आखिर किन ? हामी दर्शकहरू कस्ता सृजनालाई समय र महत्त्व दिइरहेका छौँ ? कस्ता भिडियो हेर्ने बानी परेका छौँ हामीहरू ? शब्द र सङ्गीत सुनेर त्यसको मर्मलाई महसुस गर्न सक्ने श्रोताहरू घट्दै गइरहेको हो कि ‘भाइरल’ कन्टेन्ट मात्र हेर्न बानी परिसके दर्शक हरू ? यस्तै यस्तै सोच्दा सोच्दै “मा जन्मेको माटो छोएर मर्छु” भन्ने लाइन दोहोरिएर बज्यो...!!
-· दुर्गा पंगेनी
By Durga Pangeni - November 04, 2020
Labels: मनोरन्जन, विचार, साहित्य